Daryeelka Fikus | February 2020
Ruushku wuxuu qorsheynayaa in uu taageero dowladda ka siiyo dhismaha warshad-beereedka
Ugu Weyn Ee Daryeelka Fikus
Xeerarka daryeelka ee caag-ficus
Ficus elastica, oo loo yaqaan 'rubber-ficus', waa mid ka mid ah dalagga ugu caansan. Warshadani waxay hawada ka saartaa hawada, waxay ka nadiifisaa walxaha waxyeellada leh waxayna ku daraan oksijiinka. Intaa waxaa dheer, ficus elastica waxaa loo tixgeliyaa calaamad muujinaysa maqnaashaha qoyska. Goobta caaggu ma u baahan tahay daryeel gaar ah, sida si haboon loo abaabulo meel, iyo nooca microclimate loo baahan yahay geedka this?
Bangladesh, ayaa bariis qani ah ku leh beta-carotene
Casoseberry kala duwan "Guga": sifooyinka, beerista agrotechnology
Liiska taxanaha dhirta caanka ah ee loogu talagalay beerta leh sharaxaad iyo sawir
Beerta lagu nadiifiyo "Nikulinsky": beerashada, sharaxaada kala duwan, sifooyinka iyo sawirada
Sorrel aan qabyo ahayn. Maxay geedka u tagaan fallaadhaha?
Warshad kasta waxay u baahan tahay taxadar. Wuxuu u baahan yahay inuu doorto meesha saxda ah, dhulka, ka taxadaridda diyaargarowga abuurka, ha ilaawin inaad biyo ku quudiso oo quudiso geedka. Beet waa wax reeban. Waxay, sida dhaqanka kasta, waxay u baahan tahay daryeel. Laakiin marka hore waxaad u baahan tahay inaad wax ka qabato abuurkeeda. Marka ay xididdo xididada guga ee dhulka u furan First, waxaan ogaan doonaa marka iyo marka xaaladaha heerkulka si ay u beeri dhirta. Read More
Heather hantida faa'iido iyo khilaafka
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Daryeelka Fikus 2020